केही गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस् … तीन सेकेन्ड ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
केही गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस् … तीन सेकेन्ड !
२०७७ मंसिर ७, आईतवार ०६:२३ गते
उल्लिखित धेरै कुरालाई हामी बिर्सन्छौँ । वास्तविकता के हो भने अज्ञानता तपाईंभन्दा टाढा छैन अनि ज्ञान पनि तपाईंभन्दा टाढा छैन । सुख र दुःख दुवै तपाईंभन्दा टाढा छैन । तपाईं आफ्नो जीवनमा जतासुकै जानुहोस्, जेसुकै काम गर्नुहोस्– सुख र दुःख दुवै कुरा तपाईंको साथैमा हिँडिरहेको हुन्छ ।
तपाईंको जीवनमा सबै कुरा छ र छैन पनि । दुवै कुरा हुन्छ । तपाईं आफ्नो कोठाभित्र पसेपछि चुक्कुल लाउनुहुन्छ । त्यतिखेर पनि तपाईं एक्लै हुनुहुन्न । अन्य थुप्रै कुराहरू तपाईंभित्र त्यस कोठामा गएका हुन्छन् । तपाईं पनि हुनुहुन्छ, जीवन पनि छ अनि मृत्यु पनि हुन्छ । त्यस कोठामा सबै कुरा हुन्छन्– ज्ञान, अज्ञान, अँध्यारो र उज्यालो पनि हुन्छन् । वास्तवमा ती सृष्टिकर्ता पनि त्यस कोठाभित्र साथैमा हुन्छन् । यदि हामीले ढोकालाई बन्द गरेर त्यसमा ताल्चा लगाएपछि बत्ती निभायौँ भने अँध्यारो हुनेछ । जब ढोका पहिल्यै बन्द थियो भने अँध्यारो कहाँबाट आयो होला ? कसरी भने त्यो तपाईंको साथमा नै आयो । धर्म पनि तपाईंसँगै छ अनि अधर्म पनि तपाईंसँगै छ । सारा कुरा– तपाईं जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ सबै हुन्छ । फरक के मात्र हो भने यदि तपाईंलाई यी सबै साथैमा हुन्छन् भन्ने थाहा भयो भने तपाईंले चाहनुभएको कुरालाई अपनाउन सक्नुहुन्छ । प्रेम पनि तपाईंसँगै आएको छ अनि घृणा पनि । यदि तपाईं जिउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्रेमलाई आत्मसात् गर्न सिक्नुहोस्, घृणालाई होइन । ज्ञानलाई स्वीकार गर्न सिक्नुहोस्, अज्ञानतालाई होइन । यदि जीवनमा प्रकाश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनमा प्रकाश ल्याउन सिक्नुहोस् । अँध्यारो आपैmँ हटेर जानेछ ।
यदि तपाईं आफ्नो जीवनलाई थोरै भए पनि बदल्न चाहनुहुन्छ भने केवल तीन सेकेन्ड सोच्नुहोस् । काम गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस् । केवल तीन सकेन्ड– तपाईं के गर्न लागिरहनुभएको छ । त्यसपछि जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् । किनभने, क्रोध पनि तपाईंसँगै हुन्छ अनि क्षमा पनि । तीन सेकेन्डमा तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ– क्रोध चाहिन्छ कि क्षमा । क्षमाले प्रेमलाई ल्याउँछ । प्रेमले उज्यालो ल्याउनेछ । उज्यालोले आनन्द ल्याउनेछ– तीन सेकेन्डमा । वास्तवमा तपाईँ पहिला गर्नुहुन्छ अनि पछि सोच्नुहुन्छ । यसैकारण तपाईँको जीवनमा दुःख हुन्छ ।
हामी जे–जे गर्छौँ, यसमा दुईवटा नै सम्भाव्यता रहन्छ– राम्रो पनि हुन सक्ला र खराब पनि हुन सक्ला । यदि हामीले सोच–विचार गरेर काम ग¥यौँ, यो बुझेर काम ग¥यौँ– हाम्रो प्रकृति नै हो बिर्सने अनि मैले के कोशिस गर्नुपर्छ भने म नबिर्सूँ, त्यस चीजलाई नबिर्सूँ जुन मेरा लागि आवश्यक छ । यदि यो कुरा याद रह्यो भने तपाईँको जिन्दगीमा आपैmँ नै परिवर्तन आउँछ । यदि हामी यो संसारमा कुनै परिवर्तनको कामना गर्छौँ भने त्यो परिवर्तन पनि संसारबाट सुरू हुने होइन । त्यो तपाईंबाटै प्रारम्भ हुन्छ ।
तपाईं जे जति कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, आनन्द पाउने अपेक्षाले नै गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईं दुःख सहन गर्न सक्नुहुन्न । मानिसको नाताले तपाईंको प्रकृति कस्तो छ भने तपाईं दुःख सहन सक्नुहुन्न । तथापि, अपार सुखलाई भने तपाईं सहन सक्नुहुन्छ । मानिसका लागि सुखको कुनै सीमा हुँदैन । सानो दुःखका कारण पनि मानिस दुःखी हुन्छ । हरेक चीजमा सुख र दुःख दुवै हुन्छ तर यसमध्येबाट तपाईंले नै छान्नुपर्छ । तपाईं आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ– सुख चाहनुहुन्छ या दुःखको चाहना राख्नुहुन्छ ! जुन दिन दुःखी हुन चाहनुहुन्छ, दुःख पनि उपलब्ध हुन्छ । जुन दिन सुखको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो सुख पनि उपलब्ध हुन्छ । यदि तपाईंले मेरो यस कुरालाई बुझ्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ ।
प्रत्येक मानिसले आफ्नो जीवनमा सुख चाहन्छ । सुख त हुनु पनि पर्छ किनभने मानिसले सुखी भएर आफ्नो जीवनलाई बिताउन पाउनु, यो उसको अधिकार नै हो । त्यो सुखलाई प्राप्त गर्नका लागि मानिस आफ्नो परिवार र आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर रातदिन मिहिनेत गरिरहन्छ । त्यसका लागि उसले प्रत्येक क्षण प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । तर, हरेक मानिसले जुन वास्तविक सुखको कामना गरिरहेको छ, त्यसका लागि जुन प्रयास गरिरहेको छ, त्यो कत्तिको ठीक छ त ?
हाम्रो जीवनमा जो–जोसँग हाम्रो सम्बन्ध छः बच्चा, आमा, बुवा या अन्य नातेदारहरू, ती सबैका लागि दस सेकेन्डका लागि मात्र नै किन नहोस् एउटा सानो स्वर्ग बनाऊँ भनेर सोच्नुपर्दछ । बच्चाका लागि स्वर्ग के हुन्छ ? हामी उनीहरूसँग केही समय भए पनि सँगै बसौँ र उनीहरूको पढाइ तथा अन्य कामहरूमा सहयोग गरौँ । हामी आफ्ना आमाबुवाहरूसँग रहेर केही कुरा गरेर थोरै समय भए पनि बिताउने गरौँ । पति–पत्नीहरूले एकअर्कालाई सम्मान गरून् । हामीले यसो गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो परिवारमा सधैँका लागि सुख शान्ति हुन सक्छ । तर, हामीहरूले यस्ता कुरालाई भुलेर एक आपसमा बहस गर्न अघि सर्छौँ । हामी उनीहरूकै कुरालाई वास्ता गरिरहन्छौँ जसले हामीलाई केही वास्ता गरिरहेकै हुँदैनन् । हामीले कमसेकम आफ्ना छेउछाउका छरछिमेकी, आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग प्रेम र सद्भावको वातावरण सृजना गर्दै एक अर्काप्रति सद्व्यवहार गरेर सानो स्वर्ग बनाउने कोसिस गर्न सक्छौँ । यदि प्रत्येक मानिसले यो संसारमा यसो गर्न थाल्ने हो भने त एउटा ठूलो परिवर्तन हुनसक्छ । यसरी संसारभरि नै शान्ति सम्भव हुन सक्छ । यद्यपि मानिसहरूले यो कुरालाई असम्भव छ भनेर सोचिरहेका छन् । यदि चन्द्रमासम्म पुगेको कुरालाई हेर्ने हो भने जसले त्यहाँ जान सम्भव छ भनेर भने उनीहरूकै कारणले त्यो सम्भव भयो । हामी पनि आफ्नो जीवनमा सानो स्वर्ग बनाउने कार्यका लागि प्रयास गर्न सक्छौँ, जसबाट सबैको जीवनमा सुख–शान्ति सम्भव हुन सकोस् ।
(यो लेख प्रेम रावतको सन्देशबाट साभार गरी अनुवाद गरिएको हो । उहाँ मानवता र शान्तिका विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected] लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)